Dadyoow aad kor loogu qaadey cashuurta - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Dadyoow aad kor loogu qaadey cashuurta
La cusbooneeyay tisdag 13 december 2016 kl 12.58
La daabacay tisdag 13 december 2016 kl 10.07
Snow boll - howlaha wada-shaqeeynta Skatteverket iyo Säpo
Xarunta wakaaladda canshuuraha Sweden. sawir: Kenny Bengtsson / SvD / TT
Wakaaladda cashuuraha Sweden Skatteverket ayaa kor u qaaday cashuurta ay waajib tahay iney bixiyaan 120 ruux.
– 400 ee ruux oo ay noo soo gudbisay hayadda nabadsugidda Säpoayaannu howlahooda soo gabagabeeyney 120 ka mid ah baaristooda. Middaasi oo aymacnaheedu tahay iney dadyoowgaasi bixiyaan canshuur dheeri ah oo gaarsii-san10 malyan oo koron. Baaris ayaannu dadyoowgaa ku sameeyney, marar badanna waadadyoow aan bixin canshuurtii looga baahnaa, sida ay sheegtay Pia Bergman.
Muddo iminka sannad laga joogo ayay hayadda canshuuraha la soo xiriireen ciidanka nabad-sugidda Säpo iyagoona wax ka weeydiiyay dadyoow lagu tuhun-san yahay miisaaniyad-gelinta howlaha argagixisada iyo iney canshuurta u bixiyaan sidii looga baahnaa. Tirada dadyoowgaa oo gaarsiisn 400 oo ruux sida uu qoray war-geeyska Sydsvenska Dagbladet, halkaasina oo 120 ka mid ah howlahoodii la dhameeyey, isla-markaana kor loo qaadey canshuurta ey bixiyaan. Sida ay sheegtay Pia Bergman oo ka howl-gasha wakaaladda Canshuuraha in 120-ka ruux ey ku kala dhaqan yihiin magaalooyin Stockholm, Göteborg, Malmö, Gävle iyo nawaaxiga magaalada Örebro.
– Waxaa dadyoowgaa ka mid qaar ku nool dhaqaalaha caydha, hase yeeshee kolkii aannu eegney koontooyinka ey lacaguhu ugu soo dhacaan iney soo galaan lacago ka kala yimid dadyoow iyo shirkado kala duwan. Waxaa kaloo nooga muuqday dadyoow bulshada darajo sare ka haya oo lacagaha soo gaara aan lagu macneeyn karin mushaarooyinkooda iyo xisaab-xirka sannadka oo ey sameeyaan. Sawirro kala duwan ayaa nooga soo baxay, sida ay sheegtay Pia Bergman.
Dhanka kale waxaa jira dadyoow lagu tuhun-san yahay miisaaniyad-gelinta howlaha argagixisada oo ey soo gaareen lacago aan waajib loogu lahayn in la canshuuro.
– Qaarkood ma aannu daba-gelin kadib markii aanu baaritaankii koowaad ku sameeyney, kuwaasina oo ey koontadooda lacagaha ku soo dhaceen lacago badan oo ah daymaha lagu qaato farriimaha SMS-ka. Dadyoowgaasina oo la waayo dabadeed. Halka deymaha lagu qaato farriimaha SMS aaney ahayn kuwo xaq loogu leeyahey in la canshuuro, sida ay sheegtay Pia Bergman.
Wakaaladda canshuuraha Sweden ayaa ku talo jirta inay halkaa ka sii wado baaritaanka dadyoowga lagu tuhun-san yahay miisaaniyad gelinta falalka argagixis-nimada.
– Illaa iyo hadda waxaannu baaristoodii soo gabagabeeyney 120, tiro middaa u dhiganta ayaannu faraha kula jirnaa, halka qaar kalena eynaan weli bilaabin, sida ay sheegtay Pia Bergman, ahna isku duwaha howlaha dembiyada dhaqaalaha ee wakaaladda canshuuraha.